Ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ndị na-eweta ngwaahịa - Ndị na-emepụta ngwaahịa China
A maara anyị nke ọma dị ka otu n'ime ndị na-emepụta ihe na-akpụ akpụ rọba na China, nwere ahụmịhe bara ụba. Ọ bụrụ na ị na-aga ịzụta elu mma unscrewing plastic ebu mere na China, welcome to get more information from our factory.Our company not only give you with high quality Plastic Medical Device, Cover Case For Switch 4 Wires, Drill Tool Handle Cover RHLH, mana nwekwara ike hazie azịza maka ngwa pụrụiche gị dịka mgbanwe dị na ọnọdụ ngwa ahịa si dị, si otú a na-abawanye ego azụmaahịa gị na asọmpi ahịa.
Akpụkpọ anụ ịgbanye nke ọma nke ọma
Ọkachamara nkenke Plastic Injection Mold Manufacturer Precision plastic injection ebu bụ ụdị nke ọtụtụ mgbagwoju na expensivie ebu, na-achọ zuru okè ebu imewe, na-achọ elu nkenke n'ichepụta igwe iru ya elu nkenke ndidi, na siri ike ọkọlọtọ….
Ngwa maka mkpuchi plastik nke akụkụ eletrọnịkị
Onye na-emepụta Ngwa plastik
JS MOLD Mold bụ otu ọkachamara na China, onye ọkachamara ya na akpaaka / ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị / ngwa elektrọn / ngwa ụlọ wdg karịa afọ 15, ka ọ dị ugbu a, anyị na-eme ihe nrụpụta na ebu. anyị na-etinye uche zuru oke na usoro ọ bụla na-esote iji nweta ezigbo nsonaazụ na ọnụahịa / njikwa /…
JS MOLD Mold bụ ISO 9001: 2015 kwadoro omenala tooling emeputa nke ebu, gụnyere injection ebu, plastic ebu & plastic akpụ ebu. Ikike na-agụnye ịkpụzi injection site na iji presses si 45 Ton-1300ton, 2 shot molding, fanye ịkpụzi, prototyping, tooling, ngwaahịa & ebu ...
Onye na-emepụta ihe ọkpụkpụ plastik
Plastic ebu maka ngwa eletriki Ngwa nyocha ngwaahịa: Biko mata onye na-emepụta ihe na-emepụta plastik, nwere ahụmahụ, nke ọma na ahaziri ya, ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ 500 kachasị elu nke ụwa, ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe. Arụmọrụ kwụsiri ike, ọnụ ala, ntụpọ ogologo ntutu isi, àgwà a pụrụ ịdabere na ya, nwere ike ịhazi ya ...
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke plastik
Aha ngwaahịa: Ọkachamara OEM Plastic Mold Factory Mere na China Design Software: Solidworks/PROE/UG/CAD.ETC.
Ihe ndabere: LKM,HASCO.ETC.
Ihe akpụzi: S136/2344/718/738/NAK80/P20
Ihe plastik: PVC/PA66/PC/PE/POM/PMMA/ABS/TPU/TPE/PE/PP.ETC.
Ndụ ebu: 100,000-300,000
Ọgba agba: Otu/Otutu…
Plastic injection Mold Maka akụkụ akpaaka
Akụkụ akpaaka kachasị elu na ụgbọ ala ịgba ọsọ, ịkpụzi injection dị elu, na-eji ihe plastik kacha mma, na-arụ ọrụ na igwe injection 1300T. JS MOLD ebu bụ mgbe niile kacha ntụkwasị obi ebu suppliers maka ndị ahịa anyị. Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị maka tooling na ịkpụzi ngwọta!
Igwe Omenala Injection Plastic
Plastic Injection Mold Mold na JS MOLD Mold: Site na njikwa imewe, nyocha siri ike igwe, nyocha electrode, nyocha isi na oghere nchara, nyocha nrụnye tupu ebu, akụkọ nnwale na nlele nlele, nyocha ngwugwu mbupụ, nke a na-achịkwa nke ọma n'okpuru ebu anyị. …
Ulo ụlọ plastik
Ihe ebu: 2344, 8407, P20, S7, wdg.
Ngwaahịa: Obere akụkụ rọba nọmba oghere: 1 ruo 48
Cavities Mold Ndụ: 100K ruo 1
Nde gbara ihe plastik: PTFE, PEEK, polymer, PVDF, PVC, CPVC, PPS, ETFE, polypropylene na PFA wdg.
Ngwa: Obere Akụkụ Plastic Injection Mold For Automotive,…
Onye nrụpụta OEM Injection Molding
Ụlọ ọrụ anyị na-emepụta injection na-enwe obi ụtọ ịnye ọtụtụ ụdị ọrụ, gụnyere ọrụ ịkpụzi injection plastic, nke otu obodo nke ndị ọrụ nwere ahụmahụ na ndị ọrụ raara onwe ha nye mere. Mgbe ị na-ahọrọ ndị na-ebubata ngwaahịa, OEM ga-atụle ọ bụghị naanị ọnụahịa nke akụrụngwa ha, mana…
123456 Ọzọ > >> Peeji nke 1/7